July 2013 ~ Zawlin IT World
Beini Minidwep-gtk ဖြင့် wifi password ရယူနည်း အဆင်ဆင့်
9:42 PM wifi password hacking No comments
Beini Software ကိုသုံးပြီး minidwep-gtk program ဖြင့် wifi password ရယူခြင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကိုမဒေါင်းခင် ပထမဦးဆုံး လိုအပ်တာကတော့ CD အလွတ်တစ်ချပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိပြီဆိုလျှင်
.Beini Software ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဒေါင်းပီးလျှင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း zip ကို ဖြည်လိုက်ပါ။ ဖြည်တဲ့အခါ ပြန်ရှာရ လွယ်ကူအောင် Desktop ပေါ်မှာ ဖြည်စေချင်ပါတယ်။
ဖြည်ပြီးပြီဆိုလျှင် ဖြည်ထားတဲ့ဖိုင်ကို CD တစ်ချပ် ပြုလုပ်ရပါမယ်။ CD ကို CD Rom ထဲ ထည့်ပါ။ Burning Software ရှိသူတွေက အလွယ်တကူ Burn နိုင်သလို Burning Software မရှိသူတွေအတွက်.Winiso Software ကို ဒီမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။ Winiso ကို ဒေါင်းပီးလျှင်တော့ ထုံးစံအတိုင်း အင်စတော လုပ်ရပါမယ်။ အင်စတောလုပ်ပီးလျှင် ထို Software ကို Run လိုက်ပါ။
minidwep-gtk ဖြင့် hack ရတာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလဲ နားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လက်တွေ့ ပိုင်း ပိုအားသန်လို့စာနဲ့ ရေးရှင်းပြတဲ့အခါ ဖတ်ရှုရတာ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့လျှင် နားလည်ပေးဖို့ တောင်းပန်ပါတယ်။ လောလောဆည် WEP ကိုပဲ hack နိုင်သေးပြီး WPA2-PSK ကိုတော့ လက်လျော့ထားပါတယ်။ တခြား hack နိုင်သူများ၇ှိရင် ဝေမျှပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
Credit to .အဝေးဆီက မလေးရောက် ခရီးသည်
post by .zawlinitworld
1:53 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, software မြို့ တော်, နည်းလမ်းများ 1 comment
မှတ်ချက် ဒီပို့ လေးကိုကျွန်တော်တင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမရှင်းပါကအောက်
ဖြည့်စွက်ချက်။ လိုအပ်ချက် တစ်ခုရှိသွားတယ်ဗျ kali မှာသုံးမှ မဖြတ်တာ ကျန်တာတွေမှာဖြတ်တယ်နော် ပြီးတော့ ကွန်ပျူတာမပိတ်ခင် အင်တာနက်အရင်ပိတ်ရတယ်။ မနေ့က kali OS (Gnome) နဲ့ သုံးတာ မဖြတ်လို့ ဒီနေ့ backtrakနဲ့သုံးတော့ ဖြတ်သွားတယ် မကျေနပ်လို့ kali နဲ့ ပြန်သုံးတာ မဖြတ်ဘူး kali ကိုနဲ့အဆက်သွယ်မဖြတ်ခင် အင်တာနက်ကိုအရင်ပိတ်ဖို့မမေ့နဲ့အုံးဗျ။
Kali OS, BT တွေအကြောင်းအသေးစိတ်သိချင် ဒီ ဂရုကိုသွားပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..........
.Credit to http://kyawsoemoe2013.blogspot.com/
Samsung Galaxy Star Duos GT-S5282 ကို Root လုပ်နည်း
1:43 AM Samsung No comments
Samsung Galaxy Star Duos GT-S5282 ကို Root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါများအတွက်......
အရင်ဆုံး ဖုန်း usb settings တွေကို အမှတ်လိုက်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ ပြီရင်အောက်က
Root tool ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီ ကွန်ပျူတာမှာ သွင်းပေးလိုက်ပါ
ပြီရင် ဖုန်းကို computer နဲချိတ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီရင် Root ဆိုတဲ့ နေရာမှာနှိပ်ပါ ပြီရင်ခဏစောင့်ပါ phone က reboot ကျပြီ ပြန်တက်လာရင်
root ဖောက်လို့ အောင်မြင်ပါပြီ
.Credit to ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ
1:39 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, Nokia No comments
Nokia Symbian^3 အတွက် facebook ပါ
ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းဆိုမြန်မာစာကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရပါတယ် fontမထပ်ပါ ဆင်ပြေပါစေ
post by AungKyaw
1:25 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
I . C (ယေဘူယ ခွဲခြားနည်း)
၁ ။ POWER I.C ခွဲခြားရင် ဘေးမှာ POWER Crystal ရှိတယ် Capacitor တွေအများကြီးရှိတယ်
၂ ။ Nokia မှာ Second Powei IC ခွဲလိုလျှင် ဘေးမှာ Coil အ၀ိုင်းကြီးရှိတယ် (Betty တို့ Tahbo စသည်ဖြင့် IC ပေါ်တွင်ရေးထားသည်။)
၃ ။ CPU ခွဲလိုလျှင် လေးထောင့်ညီညီနှင့် အကြီးဆုံး IC
၄ ။ CPU ဘေးမှာ ရှည်ရှည်သွယ်သွယ် IC ကSoftware ရေးတဲ့ Flash IC
၅ ။ GSM Pa IC က အင်တာနာ Pad အနီးနားမှာ
၆ ။ WCDMA PA IC က ဘေးနားမှာDuplex Falter ရဲ့ ကာလာရောင် ရွှေ ကြေး အနက်ရောင် စသည်ဖြင့် ဘေးနားမှာရှိ
၇ ။ GSM နဲ့ WCDMA မှာ GSM IC က နည်းနည်းပိုကြီးတယ် Duplex FLTER က Digital Mic
၈ ။ RF IC (Network IC) ခွဲလိုလျှင် ဘေးမှာ Network Crystal ,Soft Falter (မဲမဲအရောင်)ရှိ
၉ ။ Bluetooth IC ဘေးနားမှာ MHz ရှိတယ် (Nokia) မှာဆို အဖြူရောင် အခြားမှာဆို နှစ်လုံးပြူး Capacitor ထက် နည်းနည်းသေးတဲ့ပုံအတိုင်းလာတယ်
၁၀။ WiFi IC က Power IC အရွယ်လောက်ရှိတယ် သူဘေးနားမှာ သူ့အတွက်သီးသန့် INT တစ်ခုရှိတယ်
၁၁။ BackLight IC ဘေးမှာ ကွိုင် အ၀ိုင်းကြီး ရှိ SAMSUNG HUAWEI SONY Etc ဘေးမှာ Diode , Coil ရှိတယ်
၁၂။ GPS IC က ပြောင်လက်လက် ပါးပါးလေး Crystal သေးသေးလေးလည်းဘေးမှာရှိတယ်
၁၃။ USB IC က Charging လမ်းကြောင်း USB Connector အနီးမှာ သေးသေးလေး
၁၄။ SIM IC က SIM Connector ရဲ့ဘေးနားလောက်မှာ မာကင်ရဲ့ အောက်မှာ (စောင်းကြည့်လျှင်အလယ်လွတ် ထောင့်လွတ်)
၁၅။ Camera IC က Camera အိုက်ရဲ့အနီးအနားမှာ Second Power IC အရွယ်လောက်ရှိမယ်
၁၆။ Display IC ကDisplay Connector ရဲ့အနီးမှာ
၁၇။ Keypad IC က Keypad ရဲ့အနီး အပေါ် ဒါမှမဟုတ်အောက်
၁၈။ memory Card IC က mmc caplock ရဲ့ ဘေးနားမှာ
RESISTOR (R) (အပေါ်ကအမဲ)ဖြုတ်လိုက်ရင်အောက်ကအဖြူ
CAPACITOR (C)(or) CONDENSER အသားရောင်လေးထောင့် တိုင်းရင်(Circuit Board မှ ဖြုတ် တိုင်းရမယ်)
DIODE (D) မှာ ငုတ်သေးသေးလေးတွေပါ (Cathode=K ဘက်မှ အနီလေးပါတယ် Cathode မှာအနီ Anode=A ဘက်မှာအနက် မှန်အောင်ခွဲရမည်
COIL (L) ဖြုတ်စရာမလို Circuit မှာတိုင်း (ပုံစံက) Resistor နဲ့တူတယ် နန်းကြိုးသေးသေးလေးတွေပတ် အ၀ိုင်းအမည်းနဲ့လည်းလာ
FUSE (F) က Capacitor နဲ့လွဲတတ်တယ်
TRANSISTOR ဖြုတ်တိုင်းရတယ် Transistor နဲ့ Diode နဲ့ဆင်တယ် နှစ်ငုတ်နဲ့ သုံးငုတ်ဘဲကွာတယ်
CRYSTAL (Y) က ကောင်းမကောင်းတိုင်းမရ Size တူတာလဲ ကြည့်ပြီးမှ သိနိုင် (မှန်အောင်တပ်ရမှာက အနက်ရောင် ငုတ်လေးနှစ်ဘက် ကွေးကွေးလေး (-)ရှိတယ် ဖြုတ်ရင်အသေအချာမှတ်
Back Up BATTERY ကို AIR GUN ,HEAT GUN နဲ့ မဖြုတ်ရပေါက်ကွဲတတ်သည်။
*#0*# Test လုပ်ရန်ပေါ် receiver button ကိုနှိပ် အသံရှည်မြည်
*#*#2846579#*#* Project menu ---->>> Network Setting ----->>>Operator ---->>>CHINA TELECOM CNဆိုရင် မှန်တယ်(အစစ်ပေါ့ကွာ)
နောက်တစ်နည်း MEID (*#06#)နံပါတ်နှင့် battery အောက်မှ Serieal Number တူတယ်
post by Nay Aung
မြဝတီ တိုက်ရိုက်အစီအစဉ် (MWD Live) အား IPhone/Pad/Pod Touch ဖြင့်ကြည့်ရှု့ခြင်း
2:55 AM software မြို့ တော်, နည်းလမ်းများ No comments
မြဝတီတိုက်ရိုက် အစီအစဉ် (MWD Live) ကို မိမိ iPhone/Pad/Pod touch များမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနည်းကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိ iPhone/Pad/Pod touch မှာ OPlayer လို့ခေါ်တဲ့ဆော့ဝဲ နဲ့ဲ install လုပ်နည်းအပြည့် အစုံကိုအောက်ကလိုင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်တော့ နော်ကျွန်တော်ဆီမှာလိုင်းမကောင်းလိုမတင်ပေးတော့ဘူးနော်အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
FACEBOOK ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီ (HOW TO)
10:11 AM facebook ဆိုင်ရာ, software မြို့ တော်, နည်းလမ်းများ No comments
Facebook ကို ယခင်က မြန်မာများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို အဓိကထား အသုံးပြုကြပြီး အခြား ဘာသာဖြင့် အနည်းငယ် အသုံးပြုနေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ယခုတွင်မူ မြန်မာတို့ အတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် မြန်မာတချို့ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဘာသာပြန်နေသော Facebook translation team မှ မြန်မာဘာသာကို ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း ပြောင်းလဲမှုပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီလို့သိရပါတယ်။ မြန်မာဘာသာသို့ပြောင်းလဲနည်းကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ။ Facebook ရဲ့ search box မှာ Translation လို့ရိုက်ထည့်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းပါ။
Welcome To Translation ဆိုတဲ့စာမျက်နှာထပ်ပေါ်လာပါမယ်။ Selection box ထဲက " မြန်မာဘာသာ" ဆိုတာကိုရွေးပေးပြီး Continue ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အခုပေါ်လာမယ့်စာမျက်နှာမှာတော့ မြန်မာလိုမပေါ်သေးဘဲ ထိပ်ဆုံးမှာအနီရောင်ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ Warning Box လေးနဲ့ We recommendly use .... facebook to မြန်မာဘာသာ ဆိုတာလေးပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီလင့်လေးကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ပုံအတိုင်းပါ။
အခုဆိုရင်တော့ Facebook ဟာမြန်မာဘာသာသို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလိုကနေ English လိုပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ link ကိုဝင်ပါ.
ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ General Setting စာမျက်နှာအောက်ဆုံးက Language ထဲသို့ဝင်ပြီး English (UK) သို့ပြန်ပြောင်းပြီး Save Changes ကိုနှိပ်ပါ။ Facebook သည် English ဘာသာစကားဖြင့်ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
11:25 AM software မြို့ တော်, နည်းလမ်းများ No comments
ကြိုးမဲ့ အားသွင်းစနစ်၊ ကင်မရာ Megapixel 44 အဆင့် အစရှိသဖြင့် ကမ္ဘာ့ ဦးဦးဖျားဖျား နည်းပညာများ ဖော်ထုတ်ဖန်တီးပေးမယ့် Nokia ဟာ ဖုန်းတိုင်းကို နေရောင်ခြည်နဲ့ အားသွင်းလို့ရအောင် ဖန်တီးတော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရင်ကတည်းက နေရောင်ခြည်နဲ့ အားသွင်းရတဲ့ ဖုန်းများ ရှိပါတယ်။ တောင်တက်ခရီးသွားသူများ၊ ပင်လယ်ခရီးသွားသူများ သုံးဖို့ ဆိုပြီး နိုကီယာတင်မကပဲ အခြားသော ကုမ္မဏီများကလည်း ထုတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အဆင့်မြင့် Function ပါတဲ့ဖုန်းများ မဟုတ်ပါဘူး။ Nokia ကိုယ်တိုင် ကလည်း ဒီဂျစ်တယ်ဖုန်း အဆင့်မှာပဲ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတော့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာသုံး Nokia ဖုန်းတိုင်းမှာ ဆိုလာစွမ်းအင် ဆုပ်ယူမယ့် နည်းပညာ ပေါင်းစပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွှာလေး တစ်ခုထည့်ရုံပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ယင်းအလွှာဟာ ဖုန်းမှာပါတယ်လို့တောင် မသိရလောက်အောင်ပါးလွှာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခြား ဆိုလာပြားတပ်ဖုန်းများလို့ အခြပ်အကြီးကြီးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ခပ်ပါးပါး ထိုးဖောက်မြင်ရတဲ့ ဆီလီကွန်လို အလွှာတစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်ကို ပြလိုက်တာနဲ့ အလိုအလျောက် စွမ်းအင်တွေ စွဲယူနေစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းခြေအရကတော့ လာမယ့် Mobile World Congress မှာ Nokia က ယင်းနည်းပညာကို ဝင်ရောက်ပြသမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
11:03 AM software မြို့ တော်, နည်းလမ်းများ No comments
အပူပိုင်းနိုင်ငံ အသုံးပြုမှုနဲ့ အအေးပိုင်းနိုင်ငံတွေ အသုံးပြုမှုဆိုပြီး ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အထူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပါးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပူချိန်ညှိမှုကိုတော့ အားလုံး လုပ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပန်ကာ (fan) တွေနဲ့ အောက်ဘက်၊ ဘေးဘက်တွေမှာ တပ် ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အသုံးပြုသူတွေဟာ သတိထားကြရပါတယ်။ ဒီ function တွေဟာ power management တွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဓိက အပူချိန်ကို ထိန်းဖို့ လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
- Laptop ဝယ်လာတဲ့အခါမှာ display screen နဲ့ keyboard ကြားမှာ ခံထားတဲ့ keyboard protector တွေကို ဖယ်ရှားပြီး သုံးပါ။ အောက်ဘက်က fan တွေအတွက်အပေါ်ဘက် ကနေပြီး လေဝင်၊ လေထွက်တွေကို ပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။
- အရေးအကြီးဆုံး အချက်ဖြစ်တဲ့ Laptop ဝယ်တဲ့အခါမှာ Laptop ကို တပ်မယ့် သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းထားမယ့် အိတ်ကို ဝယ်ယူဖို့ပါပဲ။ ဒီအိတ်ဟာ သယ်ယူမှုအတွက် အသုံးဝင်ခြင်း တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ Laptop တစ်ခုလုံးအတွက် အလေးချိန် ဖိမှု၊ ပြုတ်ကျမှု၊ အပူချိန် ထိန်းညှိမှု၊ ESD (ElectroStatic Discharge), EMI (Elictromagnetic Interfrence) သို့မဟုတ် RFI (Radio Frequency Interferce) စတဲ့ ဘေးပြင်ပ နှောက်ယှက်မှု တွေကိုပါ ဝန်ဆောင်မှု တွေ ပေးပါတယ်။
မိမိဝယ်လိုက်တဲ့ Laptop အတွက် တစ်ပါတည်း ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Laptop ကို ဝယ်တာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Driver Backup software တွေရှိပေမဲ့ အကောင်းဆုံးက မိမိlaptop ရဲ့ Driver Cd လေးတော့ သိမ်းထားကြပါ...။
Credit : aksthutakabar
Joboshare Video Converter with keygen +install ထည့် နည်း
1:25 AM software မြို့ တော်, video covrerter No comments
အခုကျွန်တော် Video Conveter လေးတစ်ခု ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။video format နဲ့audio format မျိုးစုံကို Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။Covert လုပ်တဲ့အခါမှာလဲတစ်ခြား Conveter တွေထက်ပိုမြန်တဲအပြင်စက်ကိုလဲမလေးစေပါဘူး။သူရဲ့ ရောင်းဈေးကတော့ $28.00 ဖြစ်ပါတယ်။
Home page http://www.joboshare.com/video-converter.html
သတိ tusfiles မှဒေါင်းမယ်ဆိုရင် Download with TusFiles accelerator and get recommended offers. ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှက်ခြစ်လေးဖြုတ်ပြီးဒေါင်းပါရန်
သတိ keygen file အသုံးပြုနေချိန်အတွင်းမိမိတို့ ရဲ့Anti-Virus ကိုပိတ်ပြီးမှသုံးပါရန်
help ထဲက Enter Registration Code ကိုနှိပ်ပြီး keygen ထဲက code ကိုကူးထည့် ပေးလိုက်ပါ
10:50 AM mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ, SONY No comments
Sony Xperia Sola ကို Root ဖို့ အတွက် ဖုန်းကိုအရင် unlockbootloader လုပ်ထားရပါမယ် ဒါမှ root လုပ်လို့ အောင်မြင်ပါမယ် ကဲ unlockbootloader မလုပ်ရသေတဲ့ ဘော်ဒါများ အောက်ကလင့်ကနေ ၀င်လေ့လာ လိုက်ပါ ( sony unlockbootloader လုပ်နည်းကို လေ့လာရန် )
Android version 2.3.7 အတွက် Root ဖိုင်းကိုဒေါင်ရန်
ဒေါင်လို့ ရလာတဲ့ zipဖိုင်းကိုzipဖြည့်လိုက်ပါ ပြီရင် fastboot ဖိုဒါကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ပြီရင်ဖုန်းရဲ့ setting /application ထဲက USB debugging ကို အရင် အမှန်ခြစ်ပြီး on ထားပါ
ပြီးရင်power Key နဲ့ volume up key ကို ဖိထားပါ ၃ခါ vibration ဖြစ်ပြီးသွားရင် ဖိထားတဲ့ခလုတ်တွေကို အမြန်လွတ်ပြီvolume up keyတစ်ခုထဲ ကို ဖိထားပြီး USB cable ကိုတပ်လိုက်ပါ ဖုန်းမှာ မီးအပြာရောင်လေး လင်းလာပါမယ် ဒါဆိုfastboot folder ထဲကိုဝင် ပါ အဲဒီဖိုဒါတဲက လွတ်တဲ့တစ်နေရာမှ
Shift + Mouse Right Click
အဲဒီထဲက open command window hereကိုရွေးပါ.တက်လာတဲ့ command အမဲကွက်ထဲမှာ
ဆိုတဲ့ စာတန်ကို copy ကူပြီ အမဲကွက်ထဲမှာ paste လုပ်ပြီ Enter နှိပ်ပေးလိုက်ရင်
ခဏနေ SUCCESSFULLY ROOT ဆိုတာပေါ်လာရင်
သင့်ရဲ့ sony xperia sola လေးကို Root လို့ အောင်မြင်ပါပြီ
ဒီကောင်လေက version 4.0.4 အတွက် Root ဖိုင်းလေးပါ
Android version 4.0.4 အတွက်ဒေါင်ရန်
ဒေါင်လို့ ရလာတဲ့ကောင်ကို zip ဖြည့်ပါ ပြီရင်setting /application ထဲက USB debugging ကို အရင် အမှန်ခြစ်ပြီး on ထားပါ ပြီရင် usb နဲချိတ်ပြီ စောစောက ဒေါင်ထာတဲ့ root ဖိုင်ထဲက RunMe.bat
ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါ ပြီရင် Enter နှိပ်ပေလိုက်ရင်ဖုန်းကboot ကျပြီပြန်တက်လာရင် Root လို့ ပြီပါပြီ
Posted by -ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ-
10:44 AM i mobile, mobile ဖုန်းဆိုင်ရာ No comments
I Mobile istyle 7.1 ကို root လုပ်ခြင်တဲ့ ဘော်ဒါများအတွက်
istyle7.1 ကို root မလုပ်ခင် imobile ရဲ့ cpu driver ကိုအရင်သွင်းထားပါ ဒါမှ cwm သွင်းတဲ့အခါအောင်မြင်ပါမယ် ကဲလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်းတွေကို ဒေါင်းလိုက်ပါ
CWM Root ဖိုင်းကိုဒေါင်းရန် password ( thaiinmyanmarit )
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Sp flashtool ဖိုင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါFlash Tool ဖိုဒါထဲကအပြာရောင်နဲ့ Flash Tool စာတန်နေရာမှာနှိပ်ဖွင့်ပါဒီပုံအတိုင်တက်လာပါမယ်
ပြီရင် ဇယာကွက်ပုံစံ flash toot တက်လာပြီဆိုရင်ဒုတိယစာတန် SeatterLoading နေရာမှာနှိပ်ပြီ စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ cwm ဖိုဒါ ကိုဖွင့်လိုက်ပြီ အထဲက MT6577........ စာတန်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ Recovery တစ်နေရာမှာဘဲ အမှတ်ခြစ်ရပါမယ်ကျန်တဲ့နေရာခြစ်စရာ မလိုပါဘူ
အရင်ဆုံ ဖုန်းကိုပိတ်ပြီ ဘတ်ထရီးဖြုတ်လိုက်ပါ ပြီရင်
ကွန်ပျူတာကဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် အပေါ်က downloand နေရာမှာနှိပ်ပြီ ထားလိုက်ပါ ခဏနေအောက်နာမှာရာခိုင်နှုန်တန်တက်လာပါမယ်
ဒီလို အစိမ်ရောင်းအ၀ိုင်တက်လာပြီဆိုရင် ဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ ဘက်ထရီပါထုတ်လိုက်ပြီ
ခဏထားတာပါ ပြီရင် ဘက်ထရီပြန်တက်ပြီ vol-up +vol down + power ကိုပြိုင်တူဖိထာပြီ recovery mode
၀င်ကြည့်ပါ ဒီပုံတိုင်တက်လာပြီ ဆိုရင် Cwm recovery mode သွင်းလို့ အောင်မြင်ပါပြီ
root ဆက်လုပ်ဖို့ အတွက် root zip ဖိုင်းကိုဆက်ဒေါင်းပါ
ပြီရင် sd card ထဲcopy ကူထည့်လိုက်ပါ ပြီရင် စောစောက cwm recovery ခေါ်တဲ့နည်းအတိုင်ပြန်ခေါ်ပြီ
စောစောက sd card ထဲသွင်းထားတဲ့ root zip ဖိုင်းကို install လုပ်ပေးပြီ
Reboot Systems Now ကိုရွေးပေးလိုက်ရင်ဖုန်းက boot ပြန်ကျပြီ တက်လာရင် ဒီပုံအတိုင်ဖြစ်နေပါပြီ
အကယ်၍ superuser app မတက်သေပါက စောစောက ဒေါင်းထားတဲ့ cwm zip ဖိုင်းထဲက superuser apkကိုသွင်းပေးလိုက်ရင်အာလုံးအဆင်ပြေပါပြီ
Posted by ထိုင်းရောက် IT လူငယ်များ